Hamilton Masakadza Biography 2017 - Facts, Childhood, Wiki, Family Life & Achievements
Home / Biography / Hamilton Masakadza
admin September 14, 2017 Biography Leave a comment 5 Views
Right-handed batsman who’s notable to be the very first Zimbabwean cricketer to attain several milestones, including starting to be the very first dark Zimbabwean to score a first-class hundred years. He has performed domestically for groups just like the Sylhet Royals and it has symbolized Zimbabwe at competitions just like the ICC Globe Twenty20 and Cricket Globe Cup. He was created in the administrative centre town of Zimbabwe, Harare, and produced his local debut with Manicaland in 2000. His starting relationship of 167 with Vusi Sibanda within a 1 DAY International against Western world Indies in Dec 2007 set a fresh nationwide record. His brothers Shingirai Masakadza and Wellington Masakadza may also be cricketers. He was teammates with Brendan Taylor in the Zimbabwean nationwide team on the 2015 Cricket Globe Cup.
Tags 1983 9 August August 9 Cricket Player Hamilton Masakadza Leo Zimbabwe
Hurdler who also won a metallic medal in the 4×400-meter hurdles in the 2006 Globe …